1. खोज गर्न योजना कसरी बनाउने ? - Investigative Journalism Manual
प्रायशः पत्रकारले पाएका स्टोरी आइडिया यस्ता हुन्छन् तिनमा अति धेरै पक्षमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ (त्यसो गर्न असम्भव हुन पनि सक्छ) । खोज पत्रकार तथा अमेरिकी समाचारपत्र अटलान्टा जर्नल–कस्टिच्यूशन का पूर्व व्यवस्थापन सम्पादक थोमस ओलिभरले भनेका छन्ः ‘खोजमूलक स्टोरीको प्रोजेक्टले सबै कुरा समेट्न खोजेको हुनसक्छ । कहिलेकाहीं त आफूले खोज गरिरहेको विषयका सबै पक्ष व्यापक रूपमा समेट्न खोजेको हुनसक्छ । यसो हुनु योजनाको दुर्बल पक्ष हो, सबल पक्ष होइन ।’ यसलाई आफ्नै किसिमले परिमार्जन गर्नुपर्छ । आफूले गर्न लागेको स्टोरीको सारांश लेख्ने कोशिश गर्नुहोस् । यस्तो सारांश लेख्नु भनेको आफ्नो स्टोरीको अन्तिम रूप कस्तो हुन्छ भनी एक अनुच्छेदमा बताउनु हो । यसो गर्नु भनेको पत्रकारका दिमागले स्टोरी ’boutमा सोच्नु हो । स्टोरी स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रिय कुन दृष्टिले हेरिएको छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । यस चरणमा निम्न प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छः
> स्टोरी किन गर्नु परेको हो ? यो स्टोरी प्रकाशित भयो भने कसले लाभ पाउँछ अथवा कसले हानि बेहोर्नुपर्छ ? यस स्टोरीले सामाजिक मूल्य अथवा व्यवहारका ’boutमा बहस चलाउन सघाउँछ ? यस स्टोरीले त्रुटिपूर्ण प्रणाली अथवा प्रक्रियामा प्रकाश पार्छ ?